बजेट प्राथमिकताको आधारमा भन्दा पनि हिजोको निरन्तरताको गन्धः डा.बाबुराम भट्टराई
काठमाडौ, २७ बैशाख । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले मुलुकको आर्थिक विकास गर्न बजेटले प्राथमिकता तोकेर जानुपर्ने बताएका छन । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बिहीवारको बैठकमा डा. भट्टराईले बजेट प्राथमिकताको आधारमा भन्दा पनि हिजोको निरन्तरताको गन्ध देखिएको धारणा राखेका हुन । आर्थिक वर्ष २०७..
सरकारी कर्मचारीको भत्ता खारेज हुने !
काठमाडौ, २७ वैशाख । सरकारी कर्मचारीले हालसम्म पाउँदै आएका महंगी र स्थानीय भत्ताब..
काठमाडौं, २७ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसिय..
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल सरकारको तर्फबाट भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्र..
मोदीको भ्रमणमाथि सांसदको प्रश्न, प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग
काठमाडौ, २६ वैशाख । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणबारे संसदमा ..
कानुन निर्माण संसदको पहिलो प्रथामिकता :अध्यक्ष तिमिल्सिना
काठमाडौं, २६ वैशाख । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र नेपालका लागि जापानका राजदूत माशाशी ओगावाबीच शिष्टचार भेट भएको छ । आफ्नो साढे चारवर्षको कार्यकाल सम्पन्न गरी स्वदेश फर्कन लागेका राजदूत ओगावाले बुधबार सिंहदरबारस्थित सचिवालयमा भेटघाट गरेका हुन । भेटका क्रममा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कार्यकाल सम्पन्न गरी स्वदेश फर्कन ला..
पर्यटन विकासमा सडक, सञ्चार र रेलको कनेक्टिभिटी मुख्यः प्रचण्ड
काठमाडौ, २६ वैशाख । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफुहरुको चाहाना नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने रहेको बताएका छन् । खुलटारमा बुधबार बिहान चीनको राजधानी बेइजिङका उपाध्यक्ष लिजियाङको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधि मण्डलसँग भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले मुख्य ध्येय पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने रहेको बताएका हुन।..
बैतडीका सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन
बैतडी, २६ बैशाख । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून भएर बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि बैतडीका केही सामुदायिक विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन शुरु गरेका छन् । अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढ्दै जान थालेपछि सामुदायिक विद्यालयले पनि अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन श..
सेना पीडित ८९ महिला र १सय ४० बालबालिकाले अझै न्याय पाएनन
चितवन, २६ वैशाख । सेनाको प्रलोभनमा परी अवैध सम्बन्धबाट जन्मिएका १४० बालबालिका र तीनका आमाले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका सेनाद्धारा महिला र उनीहरुका छोराछोरी पीडित बनेका हुन् । पीडित ११६ जना महिलामध्ये २७ जनाको श्रीमान् पहिचान गरी कानूनी न्याय दिलाइएको उनीहरुको न्यायका लागि लड्दै आएको ..
जेलभित्र क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्दै
सुर्खेत, २६ वैशाख । छ वर्षअघि वीरेन्द्रनगर १ स्थित अनुग्रह चर्चका केही विश्वासी सहयोगको हात फैलाउँदै जिल्ला कारागार पुगे । कैदी बन्दीका लागि खाद्यन्न सहयोग गर्ने भन्दै पुगेका उनीहरु छ वर्षयता कारागारलाई धर्म प्रचारको केन्द्र बनाउँदै आएका छन । शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानी लगायतका सहयोग प्रदान गर्ने नाममा कारागारभित्रैबाट उनीहरुले स..
काठमाडौँ, २६ वैशाख । फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्न दबाब परेको छ। प्रतिनिधिसभा र राट्रियसभा नियमावलीमा सांसदलाई फौजदारी अभियोग लागे पनि निलम्बन नगरिने व्यवस्था गरेपछि यसबारे सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्को विरोध हुँदै आएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०७५ माथि संशोधन हाल्दै सांसदहरूले फौजदारी अभि..
काठमाडाैं, २६ वैशाख । माओवादी केन्द्रले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीका सन्दर्भमा एमालेले आफूहरूसँगको छलफललाई चासो नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । सरकारमै सहभागी माओवादी मन्त्रीहरूसँग समते पर्याप्त छलफलबिनै सरकारले बजेटको अन्तिम तयारी गरेको भन्दै माओवादीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । सोमबार र मंगलबार बसेको माओवादी संसदीय दल..
अब्यवस्थित बसोबास स्थानन्तरणको तयारी, नयाँ भू–उपयोग नीति प्रस्ताव
काठमाडौं २५ बैशाख । सरकारले बसोबासलाई ब्यबस्थित गर्न तथा जमिनलाई नयाँ ढंगले पुनवर्गीकरण गर्न भू–उपयोग नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको छलफलमा ती दुई विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य गर्ने समझदारी भएको हो । ‘छलफलमा अव्यस्थित बसोबासलाई कस..
राष्ट्रियसभा जनप्रतिनिधिको पनि प्रतिनिधि संस्थाः अध्यक्ष तिमिल्सिना
काठमाडौं, २५ वैशाख । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नेपालको राष्ट्रियसभा जनप्रतिनिधिको पनि प्रतिनिधि संस्था भएको बताएका छन् । नेपाल भ्रमणमा रहेको संयुक्त राज्य बेलायतको संसदीय टोलीले मंगलबार सिंहदरबारमा गरेको शिष्टचार भेटमा अध्यक्ष तिमल्सिनाले त्यस्तो बताएका हुन् । स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख तथा प्रदेशसभाका सा..
काठमाडौ, २५ वैशाख । हिन्दु धर्मगुरु आचार्य श्रीनिवासलाई हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा चलाइने भएको छ । आफैले आफैलाई गोलि हान्न लगाएको आरोपमा आचार्य सोमबार पक्राउ परेका थिए । तर, के मुद्दा लगाउने भन्ने तय भएको थिएन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख एवम् एसपी अरुण बीसीले आचार्यलाई हात हतियार तथा खरखजाना मुद्दा चलाइने बताए । [&h..
बालुवाटारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँग परामर्श
छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलगायतका नेताहरु सहभागी छन् ।
काठमाडौँ, २५ वैशाख । जन्म : नेपाली शिशु घरमा जन्मँदा असुरक्षित छ, अस्पतालमा जन्मन्छ भने उसको पहिलो चीत्कार सिन्डिकेटले दबिएको हुन्छ । निजी अस्पताल पुग्ने ९० प्रतिशत गर्भवतीको सिजरिङ गरिन्छ । किनकि स्वाभाविक रूपमा बच्चा जन्माउँदा अस्पतालले करिब पाँच हजार लिन मिल्छ भने सिजरिङबाट ६० हजारभन्दा बढीको बिल उठ्छ । सामान्य रूपमा जन्मन स..
पौडेल पक्ष देउवा विरुद्ध सशक्त उत्रने
काठमाडौँ, २५ वैशाख । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी विधान र सहमतिविपरीत चलेको भन्दै सशक्त प्रतिरोध गर्ने तयारी गरेको छ । पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको निवासमा आइतबार ४ नेताबीच भएको छलफलमा पदाधिकारी मनोनयन प्रक्रिया र भावी रणनीतिबारे छलफल भएको थियो । ‘भावी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबा..
कस्तो छ डाक्टर उपेन्द्र देवकोटालाई ?
काठमाडौँ, २५ वैशाख । नेपालमा एक समय एकछत्र रूपमा नसा सम्बन्धी उपचाका लागि ख्याति कमाउनुभएका वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटा यति बेला आफै बिरामी परेर झण्डै ६ महिनादेखि अरुलाई सेवा दिन नभै अरुबाटै स्वास्थ्य सेवा लिँदै हुनुहुन्छ। उहाँको नाम नै स्वास्थ्य क्षेत्रको निकै उच्च ओहदाको पहिचान हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै ख्याती ..
दोलखाका स्थानिय तहमा सहकारीको अनुगमन शुरु
दोलखा, २४ बैशाख । जिल्ला समन्वय समिति दोलखा का प्रमुख डबल पान्डेको नेतृत्वमा स्थानिय जनप्रतिनिधि र सरकारी टोलीले स्थानिय स्तरमा भएका सहकारीको अनुगमन सुरु गरेका छन् । सहकारी मुल्यमान्यता अनुसार संचालन भएनभएको,स्थानिय स्तरमा सहकारीको प्रभावकारीता र त्यसले सदस्यलाई दिने सेवासुविधाको वारेमा अनुगम गरिएको जिसस दोलखाका सदस्य मुरारीराज ..
राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारबाट ५ जना बरिष्ठ पत्रकार सम्मानित
काठमाडौं, २४ बैशाख । सरकारले प्रदान गर्ने यस वर्षको राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारबाट डा। महेन्द्र विष्ट र डा। राजेश अहिराज सम्मानित भएका छन् ।तेस्रो राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको अवसरमा शोमवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनिहरुलई सो पुरस्कार वाट सम्मान गरेकी हुन् । सोही अवरसमा वरिष्ठ पत्रकार पुरस्कारवाट बबिता बस्नेत, कौशल चेम्..
आफुले आफैलाई गोली हान्न लगाएको खुलसापछि धर्मगुरु आचार्य श्रीनिवास पक्राउ
काठमाडौ, २४ वैशाख । आफुले आफैलाई गोली हान्न लगाएको अभियोगमा हिन्दू धर्मगुरु आचार्य श्रीनिवास पक्राउ परेका छन्। मोरङ प्रहरीको टोलीले श्रीनिवासलाई सोमबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको हो। धर्मगुरू श्रीनिवास आफैंले गोली हान्न लगाएको खुलेपछि पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डिएसपी निशान्त थापाले बताए। आचार्यमाथि चैत २५ गते मोर..
यातायात व्यवसायी र सरकारबीच पाँच बुदे सहमति
काठमाडौ, २४ वैशाख । सिन्डिकेटको पक्षमा रहेका यातायात व्यवसायी र सरकारबीच पाँच बुदे सहमति भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ र यातायात व्यावसायी महासंघका पदाधिकारीबीच सोमबार पाँच बुदे सहमति भएको हो । सरकारले चालेको सिन्डिकेट अन्त्यको अभियानलाई स्वागत गर्दै सबै प्रकार सिन्डिकेटको अन्त्य तथा खारेजी गर्ने, सर..
समाजको विकृति विरुद्ध साथ दिन युवाहरुलाई गृहमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौ, २४ वैशाख । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले समाजको विकृति र विसङ्गतिविरुद्ध सरकारले शुरु गरेको अभियानमा युवालाई साथ दिन आह्वान गरेका छन । सोमवार योङ कम्युनिष्ट लिग वाइसिएलले आयोजना गरेको ‘समसामयिक परिस्थितिमा युवाको भूमिका तथा अन्तरक्रिया’ विषयक कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहनुभएका गृहमन..
पार्टी एकता संयोजन समितिको अबको बैठकले एमाले माओवादी एकताको अन्तिम टुंगो लगाउदै
काठमाडौ, २४ वैशाख । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँगको पार्टी एकतालाई छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउने बताएका छन। माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब बस्ने पार्टी एकता संयोजन समिति बैठकले एमालेसँगको पार्टी एकतालाई टुंगोमा पुर्‍याउने बताएका हुन । प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष..